Hal askari oo katirsan ciidamadda Puntland oo ku dhintay qarax bumbada dhulka lagu aaso ah oo ka dhacay Buuraha Galgala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHal askari oo katirsan ciidamadda Puntland oo ku dhintay qarax bumbada dhulka lagu aaso ah oo ka dhacay Buuraha Galgala
January 30, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Askar katirsan ciidamadda Puntland oo saaran gaariga loo yaqaan “Cabdi Bile” Buuraha Galgala. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Hal askari oo katirsan ciidamadda Puntland ayaa ku dhintay qarax bumbada dhulka lagu aaso ah oo maanta oo Talaado ah ka dhacay Buuraha Galgala ee gobolka Bari, sida ay sheegeen ilo-wareedyo milatari.
Ilo-wareedka milatari, oo magaciisa qariyay, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in hal askari uu dhintay kadib markii ay miinada dhulka lagu aaso ku qaraxday gaari ciidan deegaanka Sugure ee Buuraha Galgala.
Ugu yaraan labo askari ayaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxa, sida ilo-wareedku sheegay.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Ciidamadda Puntland ayaa maleeshiyo ka socda Al-Shabaab kula dagaalamaya Buuraha Galgala.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Arbaco ah xariga ka jaray haamaha kaydka shidaalka oo laga dhisay magaalo ganacsiyeedka Boosaaso. Madaxweyne Deni ayaa soo dhaweeyay mashruucaan, waxaana uu sheegay in [...]